यो के हो बहु-प्रयोगकर्ता कलहरू फेसटाइम like.० मा म्याकोस मोजावेका लागि म म्याकबाट हुँ
यो बहु-प्रयोगकर्ता कलहरू फेसटाइम like.० मा MacOS मोजाभको लागि जस्तो देखिन्छ
जेभियर पोर्कर | | macOS mojave
एप्पल प्रयोगकर्ताहरूलाई जोड्नका लागि नविकृत एप्पल अनुप्रयोगको प्रस्तुतीकरणमा, वा बरु को रूपमा चिनिन्छ फेसटाइम .5.0.० हामीले यसको मुख्य विशेषता देख्यौं, एकै समयमा users२ प्रयोगकर्ताहरूसँग कुरा गर्ने क्षमता।
फेसटाइमले सात बर्षदेखि विश्वभरका प्रयोगकर्ताहरूलाई जोड्दै आएको छ। पहिलो क्षणदेखि यो भिडियो गुणको साथ चकित भयोयद्यपि डाटा प्रसारण उत्कृष्ट थिएन। द न्युजरूम जस्ता श्रृंखलाहरूले यसलाई क्याप्टलेस्ट गरेको थियो, जब यसको दुई नायकहरूले निरन्तर आवेदन मार्फत एक अर्कालाई सम्पर्क गरे। तर, के समाचारहरू छन् जुन हामी म्यासोस मोजावेका लागि फेसटाइममा देख्छौं?
पहिलो, भित्र एप्पल अपरेटिंग सिस्टमको बीटासँग गरिएको परीक्षणहरू, दुबै MacOS मोजावे, आईओएस १२ वा पनि वाचोस 12, बहु-प्रयोगकर्ता कलहरू उत्कृष्ट गुणको साथ उत्पादन गरिन्छ। विशेष रूपमा, macOS Mojave सार्वजनिक बीटा र iOS १२ प्रयोगकर्ताहरू बीच कल सफल छन्।
यद्यपि, उच्च सियरा प्रयोगकर्ताहरू भाग लिन सक्छन्, तर अन्य प्रयोगकर्ताहरूको अनुहार देख्न सक्दैनन्। मुख्य कारण एकै समयमा एक भन्दा बढी व्यक्तिको साथ कल गर्न सहयोगको अभाव हो।
जसरी हामीले तपाईलाई आशा गरेका थियौं, हामीसँग नयाँ ईन्टरफेस छ। जब हामी एकल व्यक्तिसँग कुरा गर्दैछौं, छवि हामीले आज देख्न सक्ने भन्दा मिल्दो छ। मुख्य भिन्नता यो हो जहाँ बटन हाल कुराकानीको बेलामा स्न्यापशट क्याप्चर गर्न अवस्थित छ। फेसटाइम .5.0.० मा यो बटन प्रयोगकर्तालाई कुराकानीमा थप्न प्रयोग गरिन्छ।
हामीले थपेको पहिलो उपयोगकर्ताले प्रारम्भिक प्रयोगकर्तासँग स्क्रिन साझा गर्नेछ। तीन प्रयोगकर्ताहरूबाट, तिनीहरू फेसटाइम इन्टरफेसको माध्यमबाट तैर्न थाल्छन्. एप्पलको जादू यस समय हामी यो फेला पार्दछौं जब यो अग्रभूमि मा व्यक्ति मा जो वर्तमानमा अडियो प्रसारण गर्दैछ। जे होस्, हामी यसलाई प्रयोग गरेर केवल यसलाई थिचेर अग्रभूमिमा ल्याउनका लागि प्रयोगकर्ता चयन गर्न सक्छौं।
अन्ततः, तपाईं एक व्यक्ति जो यस पल मा कल गरीरहेको गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस समयमा आयोजित सामूहिक कुराकानीमा। फेसटाइम .5.0.० सेप्टेम्बरमा उपलब्ध हुनेछ, र स्पष्ट रूपमा अहिलेसम्म, यसले पनी परिवार र साथीहरूसँग हामीलाई धेरै हास्यास्पद क्षणहरू छोडिदिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » म्याक ओएस एक्स » macOS mojave » यो बहु-प्रयोगकर्ता कलहरू फेसटाइम like.० मा MacOS मोजाभको लागि जस्तो देखिन्छ
अमेजन एप्पललाई ब्रान्ड फाइनान्सको अनुसार सबैभन्दा मूल्यवान ब्रान्ड भन्दा माथि पार्छ